घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू चे एडम्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो चे एडम्सको जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी, बच्चाहरू, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
यो संक्षेपमा चे एडम्स पूर्ण जीवन कहानी को एक प्रस्तुति हो, आफ्नो शुरुआती दिन देखि शुरू हुँदा देखि उहाँ प्रसिद्ध भयो। उसको जीवनको चित्रण सारांश- उसको बायोको सारांश।
चे एडम्स जीवन कहानी।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँ उत्कृष्ट प्राविधिक क्षमतासहित एक द्रुत र बलियो अगाडि हुनुहुन्छ। यद्यपि केवल थोरैले चे एडम्सको रोचक जीवन कथा पढेका छन्। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
चे एडम्स बाल्यकाल कहानी:
बायो स्टार्टर्स को लागी, उनको उपनाम चेकी हो। चा Zach एभर्टन फ्रेड एडम्स जुलाई १ 13 1996 July को १th औं दिनमा उनकी आमा फ्रान्सेज र क्यारिबियन बुबा, इ England्ल्यान्डको लिसेस्टरको थर्नबी लॉजमा जन्मनुभएको थियो।
चे एडम्स बढ्दै साल:
के तपाईंलाई थाहा छ कि जवान चेकी आफ्नो जन्मस्थान लिसेस्टर शहरमा फ्याक्सहरूको प्रशंसकको रूपमा हुर्किएको थियो? चौथो जन्म तीन ठूला भाइबहिनी भएको कारण, उनी धेरै मायालु फुटबल र स्कूलमा भाग लिने बारेमा चिन्ता गर्थे।
चे एडम्स परिवार पृष्ठभूमि:
हामीले थर्नबी लजमा एउटा चेक चलायौं जहाँ स्ट्राइकरको जन्म भएको र हुर्काइएको थियो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यो पूर्वी लेसेस्टरको एक ईस्टेट हो जुन मध्यम-वर्गका नागरिकहरू द्वारा आबादित छ। यसले यस तथ्यलाई थप श्रेय दिन्छ कि एडम्सको सहज बाल्यकाल थियो, किनकि उसको भलो गर्नका लागि आमा-बुबालाई।
चे एडम्स परिवार मूल:
अंग्रेजी राष्ट्रिय हेर्नुहोस्। के तपाईं उसलाई सबैमा लेखिएको जैविक देख्नुहुन्छ? हामी शर्त गर्दछौं कि तपाईंले गर्नुभयो। चे एडम्सको हजुरबुबाबाट स्कटिश परिवारको जरा हुन्छ। यसका साथै उनले क्यारिबियन देश एन्टिगुवा र बार्बुडाको नागरिकता पनि दावी गर्न सक्दछन्। यो चे एडम्सका बाबुआमा मध्ये एक मध्येको जन्मस्थान हो - उसको बुवा।
कसरी क्यारियर फुटबल चे एडम्स को लागी शुरू भयो:
तपाइँले चासो दिनुहुनेछ कि हाम्रो केटाले लेस्टर सिटीको साथ धेरै परीक्षणहरू गर्यो तर क्लबको व्यवस्थापनलाई सम्भावितको रूपमा हड्ताल गरेन। हामी साँच्चिकै तिमीलाई भन्दछु, राजालाई घरमा स्वागत हुँदैन।
अगाडि बढ्दै, ऊसँग हाईफील्ड रेंजर्ससँग प्रतिस्पर्धी फुटबलमा उल्लेखनीय स engage्लग्नता थियो। धेरै समय नबित्दै ऊ कभेन्ट्री शहरमा सामेल भए जहाँ करियर फुटबलमा उनको यात्रा उचित सुरु भयो।
क्यारियर फुटबल मा चे एडम्स प्रारम्भिक वर्ष:
युवा चेकीले years बर्ष कोभन्ट्री शहरमा बिताए रसीहरू सिक्दै अगाडीको उज्ज्वल क्यारियरको लागि उनको जुत्ता बाँधेर। दुःखको कुरा, कोभेन्ट्रीले उनलाई १7वर्षको उमेरमा रिहा गर्‍यो। उनको अप्रत्याशित रिलीज पछि, एडम्सले आफ्नो शिक्षाको अनुसरण गर्ने बीचमा छनौट गर्नुपर्‍यो वा फुटबलमा कडा परिश्रम गरिरहनुपर्‍यो।
भाग्यवस, चे एडम्सका अभिभावकहरूले उनलाई आशा नगुमाउन प्रेरणा दिए। युवाले बल जम्मा गरे र यसरी गैर-लीग फुटबलको असामान्य मार्गको माध्यमबाट आफ्नो कमबैक शुरू गरे।
चे एडम्स जीवनी - प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
तत्कालीन किशोरीले गैर-लिग खेलको रफ र टम्बलमा पुरुषहरू विरुद्ध लडाई गर्यो, लिसेस्टरशायर-आउटफिट ओडबी टाउनको लागि खेल्दै इल्कस्टनमा छोटो कवच हुनु भन्दा पहिले।
चाखलाग्दो कुरा, यो इल्कस्टनमा थियो कि एडम्सले आफूलाई नन-लिग फुटबलमा सबैभन्दा बढि मांगमा खेलाडीको रूपमा स्थापित गरे।
हेर्नुहोस् कि कसले आफूलाई इल्कस्टनमा स्थापित गर्यो।
११ गोल ​​र ass सहायकका उनका १ st प्रदर्शनमा उनको प्रभावशाली तथ्या .्क 11० भन्दा बढी क्लबहरूले बेवास्ता गर्न सकेनन् जुन उनलाई एक अवसरमा खेल्न स्काउट्स पठाउँथे। शेफील्ड युनाइटेडले services १9,००० को स्थानान्तरण शुल्कको लागि आफ्नो सेवाहरू सुरक्षित गर्न समय खर्च गरेन। एडम्सले पछि समाचारकर्मीहरुलाई भन्नेछ:
"शेफील्डले मलाई हस्ताक्षर नगरेको भए म अर्को व्यापार मार्गमा हिड्ने थिएँ।"
चे एडम्स जीवनी - प्रख्यात कथा उठ्नुहोस्:
शेफिल्ड युनाइटेडको साथ लिग वनमा उनको फोर्‍या पछि, अगाडि फुटबलमा के हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुराको अन्त्य थिएन। उनी च्याम्पियनशिप क्लब बर्मिंघम सिटीमा उनको चाल सहज थियो, जबकि उनको प्रिमियर लिग पक्ष साउथम्प्टनमा हस्तान्तरण विजयी थियो। यहाँ एक भिडियो छ जुन प्रदर्शन गर्दछ चे एडम्सको भित्री विश्वास र व्याख्या गर्दछ किन संतहरूले उनलाई हस्ताक्षर गरे।
चे एडम्स बाल्यकाल कहानी र जीवनी मा यो लेख लेख्न को समय मा छिटो अगाडी, स्ट्राइकर दक्षिण पार्क मा 4-सबैभन्दा धेरै फार्म खेलाडी हो (WhoScored तथ्या .्क)। ऊ संतहरु लाई आफ्नो टिममेट जत्तिकै उचाईमा सार्न खोज्छ ड्यानी Ings, जेम्स वार्ड प्रोवेज र केली वाकर-पीटर पहिले नै गरिसकेका छौं।
सेन्ट मेरी स्टेडियममा उसको लागि जुन-जुन कुरा पनि बाहिर आयो, बाँकी, उनीहरूले भने जस्तो इतिहास हुन्छ।
चे एडम्स प्रेमिका को हो?
वर्ष २०२० हो, चेकी २ 2020 हो र हामीसँग प्रमाण छ कि ऊ अविवाहित छैन। चे एडम्स प्रेमिका अमेलिया Kate को रूप मा पहिचान गरीएको छ। उनी एक श्यामला हुन् जसले अगाडि आफ्नो दोस्रो भागको रूपमा सम्मान गर्छिन्।
उनको दोस्रो-आधा अमेलिया केटको साथ चे एडम्स हेर्नुहोस्।
तिनीहरू छुट्टी सहित सबै कुरा गर्छन् र एक पटक फुकेतको एलिफन्ट जंगल अभयारण्यमा हात्तीहरूसँग रमाईलो गरिएको भेटियो। हामीलाई प्रेमविनाको भविष्यको लागि राम्रा योजनाहरू छन् र कानूनी रूपमा जोडीहरू हुनेछन् भनेर हामीलाई बताउन कुनै soothsayer आवश्यक छैन।
जब एड एडम्स र उनको प्रेमिका फुकेतको एलिफन्ट जंगल अभयारण्य भ्रमण गर्‍यो।
चे एडम्स पारिवारिक जीवन:
लीसेस्टर मूल निवासीले सातौं टियर फुटबल देखि प्रिमियर लिग सम्मको आफ्नो यात्राको कथाहरू केही व्यक्तिहरूलाई श्रेय बिना नै भन्न सक्दैन। तिनीहरू उसको परिवार हुन्। हामी तपाईलाई चे एडम्सको परिवारको बारेमा तथ्य ल्याउँदछौं। साथै, हामी यहाँ उसका भाइबहिनीहरू र आफन्तहरूको बारेमा तथ्यहरूको रूपरेखा लिनेछौं।
चे एडम्स फादरको बारेमा:
फुटबल प्रतिभाको बुबा लेट हुनुहुन्छ। उनले चेसँग घनिष्ट बन्धनहरू साझा गरे कि उनको निधनले फोरम बिग्रियो र बिंगहममा उसको खेलमा फोकस गर्न असमर्थ भयो। हामीले माथि उल्लेख गरेजस्तै, एडम्स बुबा बुबा एन्टिगा र बार्बुडाका नागरिक हुन्। हामी उसलाई उहाँको नामबाट चिन्न सक्दैनौं, तर उहाँको विरासत सदाको लागि अगाडिको मुटुमा बस्दछ।
चे एडम्स आमाको बारेमा:
फ्रान्सेस फ्रान्सको आमा र एक मा प्रभावी छ। एडम्सले उनलाई बलिदानको रूपमा उनको फुटबल क्यारियर निर्माण गर्न मद्दतको लागि श्रेय दिन्छ। उसको अनुसार:
“मेरी आमाले मलाई प्राय: सबै समय फुटबल खेल्न देशभरि लैजानुहुन्छ। उनले मलाई आजको मानिस बनाइन्। "
चे एडम्स भाई बहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे:
यस स्ट्राइकरका तीन ठूला भाई / बहिनीहरू छन् जुन उसले खुलाउन सकेको छैन। न त उनले आफ्नो पुर्खाको रेकर्ड बाहिर दिएका छन्, विशेष गरी उनको बुवा र बुवा हजुरआमाको। त्यस्तै चे चे एडम्स चाची, काका, र काका, भतिजा र भान्जी अझै अज्ञात छन्।
चे एडम्स व्यक्तिगत जीवन:
विपक्षी डिफेंडरहरू रोक्नको लागि अगाडि को छ? शुरुवातकर्ताहरूको लागि, चे एडम्सले व्यक्तिको व्यक्तित्व लक्षणहरू समेट्छ जसको जन्म चिन्ह क्यान्सर हो।
साथी र टीमका साथीहरूले आफ्नो ख्याल राख्ने, महत्वाकांक्षी, लचिलो र भावनात्मक रूपमा बुद्धिमान आचरणको प्रमाणित गर्न सक्छन्। ऊसँग हुन रमाईलो छ र कुनै पनि अवसरमा सही कुरा मात्र थाहा छ। एडम्सलाई पौडी खेल्न र छुट्टिनु मन पर्छ। भिडियो खेल खेल्नु पनि उसको रुचि र शौकको सूचीको शीर्षमा छ।
जब उहाँ पौडी गर्दै हुनुहुन्न ऊ कुनै पनि हालतमा तैरिरहेको छ, उहाँलाई पानी भित्र पनी मनपर्छ।
चे एडम्स जीवनशैली:
आउनुहोस् हामी कसरी छलफल गर्छौं कसरी फारवर्ड बनाउँछ र आफ्नो पैसा खर्च गर्दछ। सुरु गर्नका लागि, २०२० मा net मिलियन यूरोमा उसको कुल सम्पत्तिको अनुमान। एडम्सले लीग वन, च्याम्पियनशिप, र प्रिमियर लिगमा आफ्नो करीव दशकको क्यारियरबाट यस्तो सम्पत्ति जम्मा गर्न सक्दछ।
वास्तवमा, उनले सन्तहरूसँग २०१ 2019 मा एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे जसले उनलाई वार्षिक £ १,1,560,000०,००० कमाउनेछ। एडम्स साउथेम्प्टनको शीर्ष कमाई गर्ने व्यक्तिहरूमा नपर्न सक्छ, तर उनको साप्ताहिक £ ,30,000००० को ज्यालाले उनलाई कुनै पनि विदेशी कार र महँगो घर वहन गर्न सक्छ जुन उसले कल्पना गर्‍यो।
चे एडम्स बारे तथ्यहरू:
चेकीको बाल्यकाल कहानी र जीवनीमा यस अन्तर्दृष्टि लेख्नको लागि यसलाई समेट्न, यहाँ उनको बारेमा थोरै-ज्ञात वा अनटल्ड तथ्यहरू छन्।
प्रति महिना £ 130,000
प्रति हप्ता £ 29,954
प्रति दिन £ 4,279
प्रति घण्टा £ 178
बेलायतमा, औसत व्यक्ति जसले year£,£११ एक वर्ष कमाउँछ उसले साउथ्याम्प्टनको साथ चेको वार्षिक तलब बनाउन करिब 36,611२ बर्ष र months महिना काम गर्नुपर्नेछ। यहाँ छ जुन उसले आफ्नो बायो लेख्ने समयमा प्रत्येक सेकेन्डमा कमाउँछ।
यहाँ छ ची एडम्सले कमाएदेखि नै तपाईं उनको जीवन कहानी पढ्न शुरू गर्नुभयो.
अगाडि विश्वासको मामिलामा आफ्नो अडान प्रकट भएको छैन। जे होस्, समस्याहरू चे एडम्स अभिभावकको पक्षमा छन् उसलाई एक विश्वासी हुनको लागि बढाइरहेको छ। विशेष गरी जसले इसाई धर्मको अभ्यास गर्दछ। जे होस्, तपाईले उसको बारेमा तपाईको विचारहरु लाई कमेन्ट बक्समा बाँड्न स्वागत छ।
चे एडम्सको un 74 अ of्कको अप्रिय रेटिंग छ। थप रूपमा, उहाँसँग potential of को अल्प सम्भावना रहेको छ। हामी बुझ्छौं कि स्ट्राइकर शीर्ष उडान फुटबलमा तुलनात्मक रूपमा नयाँ छ र त्यहाँ उसको लागि संख्याको उच्च अपेक्षा राख्नु हुँदैन। कम्तिमा अझै होईन।
एकदम अप्रिय अपिलिंग तर सुरुको लागि निष्पक्ष।
चे एडम्स जीवनी मा यस आकर्षक लेख्न को लागी पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी आशावादी छौं कि यसले तपाईंलाई प्रेरणा दियो कि सफलताको बाटो पारम्परिकबाट टाढा रोक्न सक्दछ। एडम्सबाट उदाहरण लिनुहोस् जसले एकेडेमी प्रणालीबाट बुट गरेपछि, नन-लिग क्लबहरूमा आफै निर्माण गरे र उनको मार्गमा काम गरे।
अब हामीले चे एडम्सका अभिभावकहरूको उहाँको अपरंपरागत क्यारियर पथको प्रक्रियामा विश्वास गरेकोमा प्रशंसा गर्नुपर्दछ। Lifebogger मा, हामी सटीकता र निष्पक्षता संग बचपन कथाहरू र जीवनी तथ्या deliver्क वितरित मा गर्व गर्दछौं। तपाईंले यस बायोमा ठिकै नदेखिने कुनै कुरा देख्नुभयो? हामीलाई सम्पर्क गर्न राम्रो गर्नुहोस्। अन्यथा, एडम्समा तपाईंको विचारहरूको बारेमा तल टिप्पणी दिनुहोस्।
पुरा नाम चा Zach एभर्टन फ्रेड एडम्स
जन्म मिति जुलाई १ 13 1996 २ को आठौं दिन
जन्मस्थान लीस्टर शहरमा थर्नबी लज। इ England्ग्ल्यान्ड।
प्रेमिका अमेलिया क्याट
सोख पौंडी, बिदा र भिडियो खेलहरू खेल्दै
तलब £ 1,560,000 प्रति वर्ष